ကြားသိသမျှ Archives - Alinnthit
CDM လုပ်နေသောဆရာဝန်၁၀၀ကျော်ကို ရဲအင်အားသုံးပြီးဖိအားပေးခြင်းခံနေရ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၁၀၀ ကျော် အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement- CDM) တွင် ပါဝင်နေသည့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ရှိ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံသို့ ယမန်နေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅)မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာပြီး ဆရာဝန်များအဆောင်မှ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု […]
ပြောချင်လွန်းလို့ သို့မဟုတ် Gen …Z တို့၏ စွမ်းဆောင်ချက်များ
ပြောချင်လွန်းလို့ သို့မဟုတ် Gen …Z တို့၏ စွမ်းဆောင်ချက်များ ၁။ အချက်အလက်တွေစီးဆင်းမှုကြီးက ကြောက်စရာကြီး။ မနေ့က သေနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ ဒီနေ့ကျ မိန်းမ မျောက်မွေးတာ ပြည်သိသွားတယ်။ ၂။ မနက်ပိုင်းက ပျံနေတဲ့ ဒရုန်းကို Drone Slayer နဲ့ လိုက်ပစ်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ […]
February 15, 2021 Alinnthit 0
ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ဆံပင်ကြောင့်အမေစုနဲ့တူသွားတဲ့အပေါ် ဖြေရှင်းပြောပြလာတဲ့မြနှင်းရည်လွင် နှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့ အမေစုကို အတုမခိုးသလို ဆံပင်နဲ့အဝတ်အစားကြောင့် အမေစုနဲ့ဆင်သွား တာပါဆိုတဲ့ မြနှင်းရည်လွင် လတ်တလောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ရေပန်စားနေတဲ့ အမေစုပုံစံနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ နှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့ အမေစုကို အတုမခိုးသလို ဆံပင်နဲ့ အဝတ်အစားကြောင့် အမေစုနဲ့ဆင်သွားတာပါလို့ သူရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က ရေးသားလာခဲ့ […]
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်အထိ ချုပ်ရမန်ယူထား
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်အထိ ချုပ်ရမန်ယူထား သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်အထိ ချုပ်ရမန်ယူထား သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ ယူထားတဲ့ ချုပ်ရက် ရမန်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်အထိ ဖြစ်တယ်လို့ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ […]
BREAKING NEWS: “ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအားလုံး ပိတ်ပြီ…………
BREAKING NEWS: “ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအားလုံး ပိတ်ပြီ………… BREAKING NEWS: “ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအားလုံး ပိတ်ပြီ၊ စစ်တပ်က အင်အားပြနေ” (Updated) မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအားလုံး ဒီကနေ့ကစလို့ ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ဘဏ်တွေက ထိပ်တန်းအကြီးတန်းအရာရှိတွေက အတည်ပြုပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းမဖက် လူထုအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ CDM အထွေထွေသပိတ်ကြီးမှာ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး […]
မီးကွင်းပစ်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်ထဲက ဆိုက်ဝါးတွေ နှင့် အဓိကအချက်ကို မမေ့သင့်တဲ့ ပြည်သူတွေ.
မီးကွင်းပစ်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်ထဲက ဆိုက်ဝါးတွေ နှင့် အဓိကအချက်ကို မမေ့သင့်တဲ့ ပြည်သူတွေ မီးကွင်းပစ်တယ်၊ ပစ်ပစ်ခြင်း ချက်ခြင်းမလောင်ပါဘူး၊ လူအားနဲ့ ငြိမ်းနိုင်လောက်ပါတယ်။ ပစ်လား၊ ဟုတ်လား? ဟုတ်မှဖမ်းပါ၊ ရပ်ကွက်ထဲ လူထောင်ချီနေတာ မီးကွင်း ဖြစ်ဖြစ် သူခိုး ဖြစ်ဖြစ် ဓါးပြ ဖြစ်ဖြစ် မလွယ်လှပါဘူး။ ကျွန်တော်သာ […]
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆန္ဒပြပွဲကို လုံခြုံရေးယူပေးသွားသောဂျပန်ရဲများ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆန္ဒပြပွဲကို လုံခြုံရေးယူပေးသွားသောဂျပန်ရဲများ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆန္ဒပြပွဲကို လုံခြုံရေးယူပေးသွားသောဂျပန်ရဲများ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား များ စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးရေးအတွက် UN ရုံးရှေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဆန္ဒပြမြန်မာပြည်သူများကို ကူညီစောင့်ရှောက်သော ဂျပန်ရဲသားများကိုလည်း […]
CDM ဖြင့် နိုင်ငံရေး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကြီးများ
CDM ဖြင့် နိုင်ငံရေး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကြီးများ CDM နှင့် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီး များ 1. Cuba ကျူးဘား 1959 2. Estonian အက်စ်တိုးနီးယန်း Soviet Socialist Republic 1989 3. Egypt အီဂျစ် 1919 4. […]
ညဖက်တွင် လူငယ်များ ရပ်ကွက် ကင်းစောင့်ရန် စီစဉ်နေ
ညဖက်တွင် လူငယ်များ ရပ်ကွက် ကင်းစောင့်ရန် စီစဉ်နေ ညဖက်တွင် လူငယ်များ ရပ်ကွက် ကင်းစောင့်ရန် စီစဉ်နေ အင်းစိန်၊ ဆယ်မိုင်ကုန်းမှာ ညပိုင်းလုံခြုံရေးအတွက် လူငယ်ကင်းအဖွဲ့တွေချထားမည်ဟုဆို စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ညပိုင်းလူဖမ်းပွဲတွေရက်ဆက်ဖြစ်လာတာကြောင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေဟာ စိတ်မလုံခြုံမှုကိုခံစားနေရတာပါ။ ဖေဖော်ဝါရီ၁၃ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ ဆယ်မိုင်ကုန်းက ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့လူငယ်တွေ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး လူငယ်ကင်းအဖွဲ့တွေ […]
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် နာမည်ကြီး လူပုဂ္ဂိလ် (၇)ဦးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
February 13, 2021 Alinnthit 0
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် နာမည်ကြီး လူပုဂ္ဂိလ် (၇)ဦးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် နာမည်ကြီး လူပုဂ္ဂိုလ် (၇)ဦးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ မင်းကိုနိုင်(ခ)ပေါ်ဦးထွန်း၊ ကျော်မင်းယု(ခ)ဂျင်မီ၊ ထွေးလင်းကို (ခ)လင်းလင်း၊ အင်းစိန်အောင်စိုး၊ မျိုးရန်နောင်သိမ်း၊ အိမ့်ပိုးဥ(ခ)အိပန်ဆယ်လိုနှင့် မောင်မောင်အေးတို့သည် ၎င်းတို့အား လူသိများသည့် အခွင့်အရေးကို […]